Damaashaadka Munaasibada 18 May Oo Caweyskii Caawa Durba Ka Bilaabmay Magaalada Hargeysa, Dhawaaqyada Xamaasada Iyo Sameecadaha Is Qabsaday Iyo Gaadiidka Oo Xayiraad Lagu Soo Rogay | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Damaashaadka Munaasibada 18 ka May ee sanad guurada 20 aad ee madax banaanida Somaliland ayaa caawa durba ka bilaabmay magaalooyinka waaweyn ee Somaliland gaar ahaan Caasimada oo sawaxanka gaadiidka iyo hugunka dhawaaqyada dadku is qabsadeen.ka dib
diyaargaraw socday labadii todobaad ee u danbeeyay.
Waxa meel walba ka baxaya iftiinka Rashka loogu talagalay dabaal degyada sidoo kale waxa maqribnimadii bilaabantay Rasaas Nool oo kor loo riday, taas oo qayb ka ah farxada Dabaal dega Madax banaanida Somaliland oo ku beegan subaxnimada.
Jidadka badhtamaha magaaladda Hargeysa iyo xaafadaha waxa ay dadku bilaabeen inay maraan, iyagoo ku xardhan boodhadh ay ku xardheen halku dhegyo kala duwan, isla markaana lulaya calanka Somaliland. Dhawaaqa heesaha munaasibadaa loogu talo galay ayaa ka baxaya goobo baddan iyo gaadiidka yar yar, iyadoo lagu xardhay calamo iyo Astaamo muujinaya Qaranimada Somaliland iyo geedi socodkii siyaasadeed ee ay soo martay qaranimada Somaliland.
Dhinaca kalena waxa aad loo xoojiyay Amaanka Magaalooyinka iyadoo ay Xukuumadda Somaliland soo saartay Amar ay ku joojinayaan isku socodka baabuurta laga bilaabo caawa 12 habeenimo ilaa beri duhurnimada, waxaana lagu amray wadayaasha Gaadiidka ka baxa magaaladu in aanay soo geli doonin wax gaadiid ahi laga bilaabo xiligaa.